Ogaden News Agency (ONA) – Meles Socoye Itobiya miyay raaci doontaa siday ahaan jireen xukuumadaha Kali-Talisyada – By Xassan Macallin
Meles Socoye Itobiya miyay raaci doontaa siday ahaan jireen xukuumadaha Kali-Talisyada – By Xassan Macallin
Posted by ONA Admin	/ July 28, 2012
Waxaa jira dhacdo marka ay ku soo marto ku soo xasuusiya dhacdo horey kuu soo martay. Waxaan xusuustaa markii aan ardayga ahaa in uu Madaxwaynihii hore ee Mozambique General Samora Michel oo ku geeriyooday shil diyaaradeed 1986dii. in Col. Mengistu Hailemaryam oo ay Gen. Samora Michel saxiib ahaayeen uu si toos ah TV-ga Ethiopia uga sheegay in uusan dhimanin Samora, ee uu nool yahay iyada oo lawada ogyahay in Gen. Samora, ku geeriyooday shil diyaaradeed.
Kooxda TPLF ee uu ka midka yihay Braket Simon, ayaa waxay leeyihiin Meles, wuu soo noqonayaa sidii iyaga oo dhigaya filimada cabsi cabsida ah (Horror Film) oo actorku intuu dhinto haddana uu soo noolaado.Waxaa arrintan loo fasiran karaa dhawaan waxaa soo noqon dona xukunkii Meles, ee ka ma dhigna in uu Meles inta uu soo noqdo xafiis fadhiisanayo.
Waxaa kale oo xusid mudan Bingu Wamutharika, madaxwaynihii Malawi isaga oo sadex bilood ka hor dhintay oo ay Mediaha aduunka iyo Dhakhaatiirtii gacanta ku hayay ay sheegeen in uu Pr.mutharika geeriyooday ayaa wasiir ka tirsan dawladiisa uu u sheegay Mediaha dawlad Melawi in uu Madaxwaynahoodu nool yahay, kuna jiro dhakhtar ku yaala wadanka South Africa.
Sababata waxay ahayd kuwii dhaxli lahaa Pr. mutharika ayaa waxay ku noqotay qaadan waa geerida ku timid madaxwaynaha. Markii hore waxay dhaheen xaaladiisa cafimaad way ka soo raynaysaa, wax yar ka dibna waxay dhaheen wuu ka sii daray, kadibna markii ay arkeen in ay Mediaha wadamada reer galbeeku ay khashifayaan ayay waxaa khasab ku noqotay in ay sheegaan geerida Pr. Bingu wa Mutharika.
Halkaa waxaa ka cadad hab dhaqanka kaligood taliyayaashu in ay isku mid yihiin.
Dhimashada Pr. Bingu wa Mutharika, ayaa waxaa aad uga naxay waagaa dawlada Maraykanka, meesha la rabay in ay dadwaynaha reer Malawi, ay ka naxaaan sidaasna waxa qortay jariidad la yidhaahdo New York Times. Jariidadu waxay qeexday in uu madaxwaynuhu u adeegi jiray danaha wadamada reer galbeedka gaar ahaan wadanka Maraykanka, inkastoo uusan gaadhin darajada uu Kaligii Taliye Meles ka gaadhay u adeega wadamo kale.
Waxaana eega muuqata oo aynu ka fahmi karaa qarinta arrinta Meles, iyo dhuumaalaysiga ay ku jiraan wadamada reer galbeedka iyo TPLF in ay xaladisu xuntay.
Waxaa walbahaar wayn ku haya wadamada reer galbeedka Meles ka dib waxa ka soo bixi doona Ethiopia iyo cidii xukunka la wareegi lahayd iyo dhinaca uu u janjeedhsan doono xukunkaasu. Waxaa kale oo ay ka baqanayaan in uu xukunku gacanta u galo cid ayna iyagu u yeedhin karin oo ugu dhaga nugul sidii Meles Zinawi, ama ay taladu faraha ka baxdo oo wadanku qas iyo lab ka bixi waayo oo ay aargosasho ka bilaabanto qowmiyahada dhexdooda, oo ay halkaas ku waayaan saxeebkooda 1aad ee Africa ee danahooda uga fulin jiray Geeska Afrika.
Waxaa kale oo ay cabsi wayni ka haysaa shaqsigii Meles badali lahaa sababta oo ah Meles muunan diyaarinin cidii badali lahayd ee kaligii umbaa fagaarayaasha aduunka ka muuqan jiray. Waxaana in aynu hoosta ka xariiqno mudan iskadaa Tigrey e` in aynan Meles oo kale Ethiopia oo dhani heli doonin. Waxaynu la wada soconaa in ay Ethiopia ku nooshahay macaawimooyinka ay aduunka ka hesho oo isaga uu xariif ku ahaa sidii uu macaawimahas uga soo uruursan lahaa wadamada reer galbeedka, Carabta, Africa, China, Isreal .. meel uu aduunka dhaafayba ma jirto. .
War sidaha Wikileaks ayaa waxa uu qoray in uu Meles yahay dano fuliyaha ama gacanyaraha wadamada reer galbadeeka , halkaasoo ay dawlada Maraykanku u adeegsadeen in uu weeraro ku qaado wadamada dariska ah sida dawlda Somaliya oo uu la dagaalamo Al shabab iyo maxaakiinta Soomlaiya, halkaas oo uu ku laayay kumayaal shacbi Soomaliyeed oo aan waxba galbsanin. Dhanka kale dawlada Ethiopia waxaa ka soo gaadhay khasaaro wayn oo laxaad leh oo aan la soo koobi karin, waxa uuna arrintan ka qirtay Meles barlamaanka Ethiopia.
TPLF oo ku jirta qarnigii 19aad
Bal arrimahaas aynu halkaas ku dhaafno oo aynu u noqono Brakat Simon, iyo kooxdiisu beenta ay dadwaynaha Ethiopia u sheegeen. Warbaahinta Dowladda Itoobiya ayaa warar is khilaafsan ka soo saaraya Illaa iyo haddana ma cadda arimaha xanuunka Raysul Wasaaraha Itoobiya Melez Zenawi.
Waxaa hadda ka hor dhacday markii uu dhintay boqorkii Ethiopa ka talinayay ee emperor Menelik (1844-1913) in uu geeriyooday 1913kii, markaas oo ay golaha wasiirada ee Ethiopia ay go’aan ku gaadheen in aynan dadwaynaha Ethiopia arrintaas la socodsiinin. Waxay ay qarinayeen dhimashada Menelik 2aad mudo sadex sano ah iyada oo dhaxalkii lagu wareejiyay Lij Iyasu oo uu awow u ahaa. Sababta ay u qarinayeen dhimashada boqor Menelik-na waxay ahayd cabsida maanta haysata oo kale un! Yaa qabsan xukunka wadanka, iyo waa la ina soo weerari iyo waxyaabo la mid ah ileen markii horeba ma ahayn xukuumad cadaalad ku dhisan e.
Kuwa dhaxaltooyada sugaya ee qarinaya in uu Kaligii Taliiye Meles geeriyooday ayaa waxaa soo baxaya warar badan oo xaqiijinaya in uu dhinac u batay oo haddii usan dhimanina waa haddii u Kooma ku jiro sidii Sharon oo kale ah. Qof walbana marka uu ilahay(SB) u qor ummbuu geeryooda waxaase cajiib ah Kaligii Taliye Meles dadkii uu dilka ku xukumay in uu isagii moodayay in uu aduunka ku waari uu ka hor maray. Qof walibana danbiga uu gaysto ayuubaa laga jari. Hasa ahaatee, dhaqanka Tigreyga/Axmaarada (Abasinya) sidaan ku naaqaano haddii uu wax yar Meles fadhiisan kari lahaa inta ay fadhisiyaan ayay soo sawiran lahayeen.
Wararka xog-ogaalka ah waxay sheegayaan in inta dastuurkii laga tagay ay hadda majarihii maamulka la wareegeen dadka ato Meles qaraabada yihiin iyo dadka ka agg dhow dhow, walow ay iyaga dhexooddana ay ka jirto kooxaysi iyo looltan madaxtinimo iyo cidii xukunka la wareegi lahayd..
Laakiin kooxdan ururka TPLF u talisaa ee xukunka ku looltamaysa waxay moodayaan in lagu jiro qarnigii 19 aad ee boqor Menilkii 2aad 3 sano la qarinayay geeridiisa, waxa kale oo ayna fahan sanayn in maanta Information technologyada aduunku meesha uu marayo aan waxba la qarin karin oo wax walba banaanka la soo dhigi karo oo qarnigii 21aad lagu jiro, sagaaro saalo muuqda ayay aas aastaa.
Mudo dhawr sano laga joogo ayay hawenayda Meles (Azeb Mesfin) mar ay guryo qaali ah ka iibsanayasay wadanka Maraykanka gaar ahaan magaalada New York xaafadaha ay dadka maal qabeenka ahi daganyihii, ayaa waxaa walaalkeed wariyayaal Ethiopian ahi ay waydiiyeen in ay walashii guryaha ay gadatay ay dhab tahay iyo in kale, waxa una ku jawaabay sidan;
“Ba magazine wist yalew nibret la gorobayt ay nagarim” taas oo macnaheedu ka dhiganyahay “ Bakhaarka reerka waxa ku jira dariska looma sheego”. Intaana waxay ka cabsanayaan in inta darisku ogado in wax loo soo doonto ama la waydiisto, wax qarina heerkaas ayay ka gaadheen. Waxaana halkaas laga fahmi karaa in ay waxyaabaha ay sheegayaan aysan waxba ka jirin hadalada isdaba marka ama is-khillafsan ee ay Biraket Simon iyo Sibahat Nega ay kala sheegayaan.
Sibahat Nega ayaa waxa uu yidhi geerida Meles maamulka TPLF waxba kama badalayso, haddaba waxaa larabaa cidii taas aamin lahayd. Waxaynu makhraati ka wada nahay in uu Meles 21kii sano ee la soo dhaafay kaligii wadanka xukumay (One Man Show). Waxaa kale oo aynu la wada soconaa in inta dastuurkii Ethiopia u yaalay meel la iska dhigay uu wadanka ku xukumayay wargeeto qofkii ka hor yimaada kurka la jarayay. Waxaa uu soo saaray wareegtooyin faro badan sida, wargadii Saxaafada xorta ah , warqadii la dagaalanka musuqmasuqa oo iyadu qabata uun kuwa aan dawlada la soconin, warqadii ladagaalanka argagixisada , wareegtadii hay`adaha samo falka ah iyo kuwo kale oo badan oo aynaan halkan ku soo koobi karin.
Hay`adihii sharci dajinta sida Baarlamaankii iyo maxkamadihii markaas ayay awoodoodii baa ba ‘een oo ay hawada ka baxeen ileen wadankii waxaa lagu xukumayaa waa wareegtooyin e.
Xukuumadaha kaligood taliyayaasha ah shaqsigu doorka uu ka ciyaro oo kaliya lama eego e waxaa adkaanaysa in la kala saaro ururkii ama nidamkii dawliga ahaa iyo shaqsigii kaligii taliyaha ahaa ileen isaga ayaa wax walba go’aamiya e. Marka uu shaqsiigaasu geeriyoodo ama uu booska ka baxana waxaynu isla markiiba arkaynaa ururkii ama nidaamkii oo meesha ka siibaxaya. Waxaana mitaal loo soo qaadan karaa Adolf Hitler oo ahaa gudoomiyihii xisbiga Naziga. Hitler waxa uu dadka ku dhex abuuray xisbigii sunta ahaa oo xididada ka galay ka dibna markii Hitler uu hawada ka baxay nidaamkiisiina wuu bur buray.
Waxaa kale oo aynu mital u soo qadan karaa madaxwaynahii Romania Nicolai Chauchesku iyo sidii lagu dilay ka daawo halkan. sidoo kale Gudoomiyihii Khmer Rouge ee wadanka Cambodia, Powel Pot waxaa kale oo iyaduna xusid mudan dilkii gudoomiyihii Tamil Tigerska Velupillai Prabhakaran ee la dilay 2009kii iyada oo aynu wada oganahay awooda ay lahayeen Tamil Tigers – ku in ay dhul haysteen oo ay xataa haysteen tangiyo iyo diyaaradaha sida tooska ah u kaca ( Helicopters).
Somaliya oo aynu wada ogayn wixii ka dhacay markii uu General Maxamed Siyaad Bare shilka baaburka galay haddii aynu tariikhdaas wax yar dib u eegno, wax badan ayay tan maanta Ethiopia ka taagan ay is shabahayaan ama ay iskaga mid yihiin.
Dalka Soomaliya waxa uu lahaa xeer iyo tastuur wadanka lagu xukumo. Waxuuna dhigayay Gen. Maxamed Cali samter oo ahaa madaxwayne ku xigeenka Somaliya in uu siihayo jagada madaxwayonimda 60 bari ama laba bilood ka diban waxaa la qabanayaa doorasho.
Waxaa kale oo aynu ka dharagsanahay kacdoonkii ka dhacay wadamada carabta ( Arab Spring) eeg mareegta (Link) hoose si aad uula socoto wixi ka dhacay wadamada carabta.
Kaligood taliyayaashu awooda dawlad kaliya gacanta kuma ahayaane wax walba oo dhaqaaqa hal shaqsi baa go’aan ka gaadha. Xukunka siday ku haysan lahaayeen umbayna ka fikiraan ee kama fikiraan in ay nidaam shaqeeya ay abuuraan. Haddii aynan sidaas ahayn oo uu nidaam (Institution) awood leh oo shaqayn ay jiri lahayeen shaqsi darteed dawladahii hore ee aynu mitaalka u soo qaadanay maysan u bur bureen.
Dawlada Belgium waxay dawlad la’aan ahayd mudo 400 (afar boqol) oo maalmood ah maadama ay ku heshiin waayeen waqoyiga (Walloons) iyo Koonfurata (Flemish) xisbiyada wadanka talada u hayay. Bal u fiirso wadanka intaas bilaa dawlada ahaa wali si heer sare ah ayuu sii shaqynayay, sababtoo ah waxaa jiray nidaam aan ku dhisnayn hal shaqsi.
Wadanka Hollandna sadex jeer ayay dawladu bur burtay sababahaas oo kale awgeed haddana wax is dilay ama rabshad ahi kama dhicin wadanka. Institution-adiisu sidiisii umbay u sii shaqaynayeen. Waxaynu wadamadaas ka baran karaa hal shaqsi ma aha waxa wadanka si kaligii taliyenimo ku xukumayee waa nidaam dajisan iyo (institutions) shaqaynaya oo sharci ku dhisan aan waxba noqonaynin haddii uu hal qofi dhinto.
Haddaba xisbiga uu Meles hogaaminayay marka uu burburay ma dhawayn. Waxa uu xisbiga TPLF burbuary markii uu dhamaaday dagaalkii ka socday Badame ee u dhaxeyeyay Ethiopia & Eritrea, halkaas oo ay TPLF tu laba u kala jabtay. Markii ay labada u kala jabeen waxaa guulaysatay kooxdii uu Meles hogaaminayay isaga ayaana sheegay in ay u dhamaatay midnimadii ururka TPLF.
Ururka ay midnimadiisu sidaas u liidato in uu xoog ku xukumo moye in uusan joogaynin way iska cadahay, kadibna wareegto uu soo saray ayaa 13 xubnood oo gudida Fulinat iyo golaha dhex lagaga saaray qaarna xabsiga ayaa loo taxabaay waxaana ka mid ahaa dadkii xabdiga loo taxaabay wasiirkii hore ee gaashan dhiga Siye Abraha, kadibana waxa uu isku shaandheyay golahii wasiirada oo uu la soo hadhay tagerayaashiisii.. Waxaa ururka TPLF ku siibatay is aamin daradii inkasta oo uu qaar wasiiro ku magacaabay haddana uma ogalaanin in ay fagaaraha aduunka ay u soo baxaan oo loo barto sidiisa oo kale.
Kuwa sharciga jabinaya ee tuutalayda Tigreyga, oo isugu jira siyaasiiyin & guurti (Odayaal) waxay ummada u sheegeen warar is khilaafasan oo muujinaya in uu durba ka dhax bilaabay looltan cidii dhaxalka la wareegi lahayd.
Bal u fiirso halakn hadii ay sidii aan kor ku soo sheenay ay jiri lahaan xukun nidaamsan ama syetem shaqynaya waxaa lagu wareejin lahaa xukunka Ku xigeenka raiisul wasaraha Ethiopia Mr. Hailemariam Desalegn oo ka soo jeeda qoomiyad yar oo la yidhaahdo Wolayta´ oo ka mid ah shuucubta koonfurta Ethiopa. Kadibna doorasho ayaa laqaban lahaa, laakin maadama uu san xeer iyo tastuurtoona shaqynaynin, xanuunka Meles inta uu soo shaac baxay ayaa waxa loo diray wadanka China oo uu ka socday shir ay lahayeen wadamada Africa & China meesha wasiirkii hore ee arrimaha dibada ee Ethiopia Seyum Mesfin oo hadda safiir ka ah wadanka China ayaa waxaa looga yeedhay wadankaas si uu uga qayb qaato go’aamada ay gaadhayaan Tuutalayda Tigreegu, cajiib!( Sebhat Nega , Neway Gebreab, Berhane Gebrekristos, Getachew Assefa ,General Samora Yonis Barket Simon & Azeb Mesfin, guurti ama Odayaal Tigre ah etl)
Loolanka xukunka Ethiopia lagu looltamayo waxa uu u dhaxeeya qoomiyada Tigeyga oo kaliya oo iyaguna kala qaybsan. Qoomiyadaha kalana waxay u arkaan gacan yarayashooda. Waxaana in aynu hoosta ka xariiqno ah haweenayda Meles in ay ugu kur kur roontahay, sababtuna waxaa weeye iyada ayaa ugu dhaqaale badan isla markaana madaxda hadda u talisa ururka TPLF waa qaar ay qaraabo yihiin iyo qaar ay iyadu keensatay, isla markiibana waxaa abuurmay koox diidan in ay Azeb u taliso wadanka
Hadda kama sheekayn karo sida ay u kala safan yihiin kooxda xukunka isku haysata ee TPLF waxaase xusid mudan haddii ay sidii aan kor ku soo sheeganay ee ahayd waxaa soo noqonaya nidaamkii Meles uu dhisay waxay ka dhigantahay isbadalada aduunka ka socda ma`aynan ku cilmi qadanin oo isla markaaba duufanta (Sunami) ayaa qaadi.
Axmaaradu waxy tidhaahda “Gulijaa bi lawaawad wot ayaa daafidim” taas oo micnaheedu ka dhiganyahay “ Dhar dhaarada oo lakala badalaa cuntada gudaha ku jirtaa ma macanayso haddii ay TPLF-un nidaamkeedii soo celiyaan waxaa laga yaaba in ay sunami kadhacdo wadanka Ethiopia oo 21 sano ee ugu danbayay qoomiyadaba qoomiyada kale colaad loo galiyay oo uu aargoosi yimaado sidii Ruwanda oo kale.
Kuwa kililka jooga.
Kuwa kilika jooga waxa weeye geela magan dabo gab kuwa sii dabayaala systemkaas xu ee aynu ka oo sheekaynay ayay ka sii liitaan oo ay gacan yare u yihiin dad wax magarato ah oo ay dadkoodii ka dhigeen in ay dilaan , qixiyaan iyo in ay xabsiyada ka buuxiyaan.
Waxaa jirtay sheeko nin oday ahaa oo bari iiga sheekeeyay oo uu yidhi
“ Talyanigu, markii uu Ogadeniya, qabsaday ayuu ku yidhi dadkeenii maadaama aysan jirin wadooyin isku xidhaa magaalooyinka in ay dhirta magalooyinka u dhaxaysa ay jaraan si uu wado uu maro u samaysto kadibna uu isna lacag Liiro la yidhado siiyo, markii ay waxooga jareen dhawr jeera uu lacagtii Liirada ahay uu keenay ayuu isla markaana baray in ay yidhaaddaan “Force italiano”.
Mudo ka dib ayaa waxaa la jabiyay is bahaysgii Germalka iyo Talyaniga ka dibna waxaa Ogadeniya qabsaday Ingriiska , markii ay dadkeenu arkeen Ingriiskii bay ku yidhadeen “Force italiano” keen lacagtii Liirada ahay, markaas ayuu Ingerskii ku yidhi anagu Talyaani,manihin ,markaas ayay ku yidhaadeen war ciyaarta naga daa oo keen Liirada , markaas ayay iska sii wateen in ay dhirta sii jaraan , manta oo aduunku uu marayo Information Technology ayay wali kuwa kilika joogaa ay dhirta sii jarayaan, wakhtigaas dadkeenu la yaaba malahayn oo waxba maynan baranin Information Technologygan manta jiraana ma jirin e sow mucjiso iyo dadnimo xumo maha in ay taliskaas gabalkiisii dhacay ay wali ku sii dhiiran yihiin in ay dadkooda laayaan.
Waxaan ka hadlaynaa waa shaqsiyaad faro ku tiris ah ee u jeedadaydu ma ah dhamaan dadkeena Ogdaniya joogaa oo dhani in ay gacan yare gumaysi u wada yihiin.
Waxaa cad in ay Tuutalayda Tigreygu ay wadankii rareen oo ay wadadii bur burka cagta saareen e bal aynu eegano meesha ay ku furan.
By : Xassan Macallin
Shabelle River says:
Waxaan kaaga mahadinayaa faalada dheer ee xogogaalka ah. Aqoonyahan iyo indheergarad adiga oo kale ah oo kali ah ayaa samayn kara barbardhigaya tirada badan ee siyaasadeed ee meel ku wada biyo shubanaya. Faaladaadu aragti dheer. Sidaas oo kalena, mug weyn.
Kolka kale, Mahadsanid, Halgame.